पार्टी एकताको १० महिनामा के–के भयो र के–के बाँकी छ ? – Janaubhar
पार्टी एकताको १० महिनामा के–के भयो र के–के बाँकी छ ?
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, चैत्र २२, २०७५ | 166 Views ||
नेकपा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको १० महिना पुगेको छ । तर, यो १० महिनामा पार्टी एकताका आधाभन्दा बढी काम टुङ्गिन सकेका छैनन् । यस अघि गठित कार्यदलका अनुसार विधान परिमार्जन, पोलिटव्यूरो गठन, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको कार्यविभाजन, केन्द्रीय आयोगहरुको गठन, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको गठन, राष्ट्रिय परिषदमा मनोनयन, प्रदेश स्तरीय विशेष कमिटीको गठन, जिल्लासहित मातहत कमिटीहरुको एकीकरण, जनवर्गीय संगठनहरुको एकीकरण, प्रवासका संगठन र सम्पर्क कमिटी एवम् मञ्चहरुको एकीकरण र केन्द्रीय विभागहरुको गठन हुन सकेको छैन । यसबाहेक राजनीतिक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन काम पनि सकिएको छैन ।
७७ वटै जिल्लाको नेतृत्व कुन समूहलाई दिने भन्ने बारे लगभग टुङ्गो लागिसकेको कुरा बाहिर आएको छ । पूर्वएमाले समूहबाट करिब ४५ जिल्लामा नेतृत्व लिने र बाँकी ३२ जिल्लामा पूर्वमाओवादी समूहले नेतृत्व लिने गरी एकता प्रस्तावमा ओली र प्रचण्डबीच सहमति बनेको स्रोतको भनाई छ । तर, ४५ जिल्लामा नेतृत्व लिने सहमति भएपनि पूर्वएमालेको समूह बीच भागबन्डाको कुरा मिल्न सकेको छैन ।
नेता नेपालले आफ्नो चासो सम्बोधन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएकाछन् । कुन प्रदेशमा पूर्व पार्टी कसले कुन–कुन जिल्ला लिने भन्ने विषयमा अन्तिम टुङ्गोे अझै लागेको देखिदैन् । तर, मोटोमोटी सहमति बनिसकेको देखिन्छ ।
तर यसमा माधव नेपालको सहमति देखिदैन । पछिल्लो पटक अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच जिल्ला नेतृत्वका विषयमा सहमति जुटेसँगै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले समानान्तर कमिटी गठनको चेतावनी दिदै नामहरुको सूची पनि तयार पारेको भन्ने कुरा बाहिरीएको छ ।
नेता नेपालले दुई अध्यक्ष बीचमा मात्र भएको सहमति अनुसार एकताको नाम लिष्ट सार्वजनिक भए समानान्तर कमिटी गठन गर्ने चेतावनी अध्यक्षद्वयलाई दिएको स्रोतको दावी छ । नेता नेपालले सचिवालयमा सहमति नजुटाई दुई अध्यक्षले मात्र जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी तोके आफुलाई मान्य नुहने बताएका हुन् ।
नेता नेपाललाई सचिवालयका अन्य तीन नेताको पनि साथ रहेको स्रोतले बतायो ।
अध्यक्ष प्रचण्ड अमेरिका जानुपूर्व सचिवालयका यी ४ नेता खुमलटार पुगेका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डसँग भएको छलफलमा एकताको गृहकार्यमा दुई अध्यक्षसँगै नेता नेपाललाई पनि राख्न अन्य तीन नेताले सुझाव दिएका थिए ।स्रोतका अनुसार यसबारे प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड बीचमा पनि छलफल भएको थियो । त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व एमाले खेमाका शीर्ष नेता नेपाल, खनाल र गौतमलाई वालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका थिए । त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपाल बीचमा पनि छुट्छुट्ै छलफल भएको स्रोतको दाबी छ । तर, कुरा भने मिलेको छैन ।
यता प्रधानमन्त्री ओलीले भने वैशाख १० गतेसम्म सबै तहका एकता टुङ्ग्याएर ‘सरप्राइज’ दिने बताइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘वैशाख १० गते हाम्रो पार्टी ७० वर्ष पूरा गर्छ । ७० वर्ष पूरा गर्नुभन्दा पहिले एकताको प्रक्रिया टुङ्गिसक्छ ।’
Prevआत्मनिर्भर मुनाहरूको परनिर्भर कथा
Nextपार्टी एकता अन्तिमचरणमा